महिला हिंसा : लकडाउन र नेपालको अवस्था | NewsKarobar
गृहपृष्ठ महिला हिंसा : लकडाउन र नेपालको अवस्था
महिला हिंसा : लकडाउन र नेपालको अवस्था
महिलालाई सृष्टिको जननीको रुपमा लिइन्छ, महिलालाई आधा पृथ्वीको संज्ञा दिने गरिन्छ, यस्ता धेरै उपमा दिइएको छ । तर, के वास्तवमा महिलालाई व्यावहारिक रुपमा यो सम्मान दिइएको छ ? महिलाले महिला भएकै कारण समाजमा निर्धक्क रुपमा हिँड्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ? व्यवहारमा कदापि यस्तो देखिँदैन ।
आज महिलालाई दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइएको छ, तेजाब फ्याँकेर बेहाल बनाइएको छ, बलात्कृत हुनुपरेको छ । अचम्म त के भने आधा पृथ्वीको संज्ञा दिने समाजमा आफ्नै बाबुबाट छोरीहरू बलात्कृत हुनुपरेको छ, आफ्नै दाजुभाइबाट बेचिनुपरेको छ । महिलालाई महिला भएकै कारणले दर्दनाक स्थितिबाट गुज्रनुपरेको छ । महिला भएकै कारणले पृथ्वीमा आउनुबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, गर्भमा नै मार्ने गरिएको छ ।
महिला भएकै कारणले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहारहरु महिला हिँसा हुन् । प्राकृतिक रुपमा महिला र पुरुषबीच हुने शारीरिक भिन्नताबाहेक समाजले बाँडफाँड गरी छुटाइदिएका क्रियाकलापले पनि कतिपय हिँसा निम्त्याउनमा भूमिका खेलेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वमा त्यस्तो कुनै देश छैन, कुनै धर्म छैन, कुनै संस्कृति छैन, जहाँ महिला सुरक्षित छन् वा महिला हिँसा भएको छैन । यसले के देखाउँछ भने महिला हिँसा भनेको महिलामाथिको गलत सोच हो अर्थात् गलत सोचको परिणाम हो ।
महिलामा हुने जम्मा रोगको १९ प्रतिशत रोगहरु घरेलु हिँसा र बलात्कारका कारण हुने गरेको छ ।
विश्वका सबै जसो देशमा महिला हिँसा देखिएको छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देश नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा दाइजोको नाममा जिउँदै जलाउने र एसिड हमलाहरु हुने विशेष रुपमा देखिएका छन् । नेपालजस्तो देशमा छाउपडीको नाममा उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक परिवर्तन स्वरुप हुने महिनावारीको समयमा महिला अलग बस्नुपर्ने र जनावरसरह व्यवहार गरिने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रसंघका अनुसार लिंगका आधारमा गरिने भौतिक र मानसिक क्षति तथा महिलालाई धम्क्याउने, ढाँट्ने, छल्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यलाई महिला हिँसा भनिन्छ । महिला हिँसामा नजिकका केटासाथीबाट हुने हिँसा पनि धेरै नै पर्छन्, जसमा भौतिक, लैंगिक तथा मनोवैज्ञानिक हिँसा पनि पर्छन् ।
विश्व बैंकका अनुसार महिलामा हुने जम्मा रोगको १९ प्रतिशत रोगहरु घरेलु हिँसा र बलात्कारको कारण हुने गरेको छ । यो तथ्यांक आफैँमा भयावह छ किनभने यो तथ्यांकअनुसार महिलाले प्रत्येक पाँच वर्षको स्वस्थ जीवनमध्ये एक वर्षको आफ्नो जीवन महिला हिँसा तथा घरेलु हिँसाको कारणले गुमाउनुपरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार माथिल्लो आम्दानी भएका देशहरुमा २३.२ प्रतिशत, २४.६ प्रतिशत पश्चिमा मुलुक र ३७.७ प्रतिशत दक्षिण एसियाली मुलुकमा महिला हिँसा देखिएको छ । अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने विश्वव्यापी रुपमा ३८ प्रतिशत हत्यामा आफ्नो नजिकको पार्टनर वा श्रीमानको हात देखिएको छ । नेपालमा महिला हिँसा दाइजो, विभिन्न खालका कुप्रथा र अवैध सम्बन्धका कारण हुने गरेको पाइएको छ ।
तलका घटनाबाट पनि केही पुष्टि हुन्छ :
० बाँकेमा १९ वर्षकी रोहिनी (नाम परिवर्तन) लाई दाइजोको रुपमा भैंसी, सुनको घडी र मोटरसाइकल नदिएको झोकमा उनको श्रीमान् फरिदले (नाम परिवर्तन) ले आगोले जलाइदिन्छन् र दुई दिनसम्म कुनै पनि औषधी उपचार र खानाबिना थुनेर राख्छन् । अवस्था एकदमै बिग्रिएपछि भारत लगिन्छ र घटना बाहिर आउँछ ।
० अर्पना (नाम परिवर्तन) जसको १५ वर्षको उमेरमा मागी विवाह हुन्छ । उनका दुई बच्चा हुन्छन् । उनका श्रीमान् असाध्यै रिसाहा हुन्छन् । घरको काममा कुनै पनि सहयोग गर्दैनन् । एक दिन उनले पानी उमालिरहेको समयमा चुरोट खानका लागि श्रीमानले लाइटर माग्छन् । लाइटर दिन अलिकति ढिला भएका रिसमा त्यो तातो पानी सबै श्रीमतीलाई खन्याउँछन् । दुई दिनपछि होस आउँदा उनी हस्पिटलमा हुन्छिन् ।
० बीरबहादुर (नाम परिवर्तन)ले श्रीमतीलाई अरुसँग लागेको शंकाका आधारमा ढोकाको आग्लो (काठको लामो र बलियो छेस्किन)ले टाउकोमा कुटी‑कुटी मार्छन् ।
माथिका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विश्वमा नै महिला हिँसा बढ्दै गइरहेको छ । केही दाइजोको नाममा, केही आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको नाममा, अन्धविश्वासको नाममा, छोरी पाएको नाममा । अनेकन् कारण छन्, जसले महिलालाई सुन्न पनि नसकिने पशुभन्दा पनि तल्लो व्यवहारका साथ पीडित बनाइरहेको पाइन्छ । समाजमा नपढेका मान्छेहरुमा त महिलाप्रति रुढीवादी सोच त देखिन्छ नै तर अहिलेका पढेको व्यक्तिमा पनि महिलालाई कुनै वस्तुको रुपमा सोच्ने सोचमा कमी छैन ।
लकडाउनमा महिला हिँसा
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने हिँसाका घटना महामारी र प्रकोपको समयमा अझ बढी देखिने गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नै प्रत्येक तीन जनामध्ये एक जना महिलाले श्रीमानबाटै हिँसाको महसुस गर्नुपरेको देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा चीनको हुवेई प्रान्तमा तीन गुणाले महिला हिँसा बढेको पाइएको छ ।
अशोका विश्वविद्यालयका अनुसार भारतमा लकडाउनको समयमा रक्सीजन्य पदार्थको सेवन बढेको र त्यसले महिला हिँसा पनि बढाएको पाइएको छ । सन् २०१९ को मार्च, अप्रिलको तुलनामा २०२० को मार्च, अप्रिलमा महिला हिँसा बढेको पाइएको छ । लकडाउनका कारण सडकमा हुने महिला हिँसाका घटना कम भएका छन् तर घरभित्रको हिँसा भने ह्वातै बढेको विश्वविद्यालयले औंल्याएको छ । महिला हिँसाको घटना गरिब परिवारभित्र मात्रै नभई मध्यम वर्गीय तथा धनी परिवारमा पनि धेरै नै बढेको छ ।
महिला हिँसाको अभियानमा कार्यरत महिला पुनस्थापना केन्द्र (डब्लुओआरइसी) का अनुसार २०२० मार्च २४ देखि मे १५ सम्ममा नेपालमा महिला तथा बालिकामाथि ३३६ वटा हिँसाका घटना भएका छन्, जसमा जम्मा घटनामध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान र घरपरिवारका सदस्यबाट महिलाहरु हिँसाको सिकार भएको पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार नेपालमा लकडाउनको समयमा भएको महिला हिँसालाई तलको चित्रबाट प्रस्ट हेर्न सकिन्छ ।
स्रोत : महिला पुनःस्थापना केन्द्र
अहिले विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या लकडाउनमा परेको छ, यसको प्रभाव महिला हिँसामा पनि प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । कार्यालयमा काम गर्न नपाएको, तलब समयमा नपाएको, बाहिर घुमफिर गर्न नपाएको, मिठो खान नपाएको, सम्पूर्ण तनाव आफ्ना पत्निलाई पोख्ने, जबर्जस्ती शारीरिक शोषण गर्न खोज्ने र रिसको झोकमा कुटपिट गर्ने जस्ता घटना पनि देखिएका छन् ।
राष्ट्रसंघ महिला संस्थाले लकडाउनको समयमा विश्वमा महिला हिँसालाई दुई भागमा बाँडेको छ ।
(१) विकसित मुलुकमा महिला हिँसा
(२) विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकमा महिला हिँसा
विकसित मुलुकमा महिला हिँसाका घटना बढिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले देखाएको छ । फ्रान्समा महिला हिँसा यो लकडाउनको समयमा ३० प्रतिशतले बढेको छ । अर्जेन्टिनामा महिला हिँसा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै साइप्रसमा ३० प्रतिशत तथा सिँगापुरमा ३३ प्रतिशतले महिला हिँसा बढेको राष्ट्र संघको तथ्यांकले देखाउँछ । लकडाउनको समयमा क्यानडा, जर्मनी, स्पेन, बेलायत र अमेरिकामा समेत महिला हिँसा बढिरहेको राष्ट्रसंघको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकमा महिला हिँसा फरक रुपमा देखिएको छ अर्थात् रजिस्टर्ड केसहरु पहिलाको भन्दा कम भएको पाइयो र किन यस्तो भयो भनेर अध्ययन गर्दा लकडाउनको समयमा पूरा समय दिनरात नै श्रीमान घरमा हुने र श्रीमतीहरु फोनबाट केस रजिस्टर्ड गर्न नसक्ने अर्थात् उजुरी गरेको थाहा पाएको खण्डमा झनै मर्कामा पर्नुपर्ने कुरा पत्ता लागेको छ । अर्थात् अहिलेको समयमा महिला झनै परिबन्दमा परेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार महिला हिँसामा भूमिका खेल्ने कुराहरु निम्नानुसार छन् :
० शिक्षाको अभाव
० बाल्यकालमा सन्तुलित आहारको कमी
० पारिवारिक हिँसा
० मनोवैज्ञानिक कारण
० बाह्य महिलासँग अर्थात् एकभन्दा बढी महिलासँगको सम्बन्ध
० सामाजिक मूल्य मान्यता
० महिला तथा पुरुषको आर्थिक असमानता
० शृंखलात्मक हिँसा
० पुरुषको नियन्त्रण गर्ने सोच
महिला हिँसा समाजका लागि ठूलो चुनौती नै भइसकेको छ, यसले स्वास्थ्य तथा अन्य कुराहरुमा सीधा रुपमा प्रभाव पार्छ । यसले बच्चाबच्चीलाई पनि सीधा रुपमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
महिला हिँसाले पार्ने प्रभाव निम्नानुसार छन् :
० शारीरिक चोटपटक
० गर्भ तुइनु, गर्भपतन हुनु । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार महिला हिँसाका कारण १६ प्रतिशतमा गर्भ तुइएको पाइएको छ भने ४१ प्रतिशत समय नपुग्दै बच्चा जन्मिएको पाइएको छ ।
० महिला हिँसाका कारण मानसिक तनाव, अत्यधिक चिन्ता, सुत्न समस्या, डिप्रेसनको समस्या देखिएका छन् ।
० विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या माइग्रेन, पेटको समस्या, ग्यास्ट्राइटिसलगायतका विभिन्न समस्या ।
० लैंगिक हिँसाका कारण धुम्रपान, मध्यपानको समस्या र पछि गएर जोखिमयुक्त यौन विकृति पनि देखिने गरेको छ ।
० लैंगिक हिँसाका कारण बच्चाहरुलाई सीधा प्रभाव पार्ने पनि देखिएको छ, यसका कारण बच्चाहरु एकदमै विचलित हुने, जसले गर्दा ठूलो हुँदा पनि सामान्य नदेखिने पाइएको छ ।
यसले सामाजिक रुपमा नै धेरै नै ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेतर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठने औंल्याएको छ ।
संगठनका अनुसार महिला हिँसा रोक्न निम्नानुसारको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ :
० धेरै नै स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने ।
० सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको महिला तथा पुरुषबीचमा विभिन्न खालको भेदभाव हटाउनुपर्ने ।
० राष्ट्रिय रुपमा नै योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ।
० महिलालाई विभिन्न खालका विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।
हामीले जसरी हेर्दा पनि महिला हिँसा दिनानुदिन बढिरहेको छ, यस्तो हुनुमा पुरुषवादी सोच नै प्रमुख कारण हो । हामीले बच्चादेखि नै महिलालाई सम्मान गर्नुपर्ने संस्कार छोरालाई सिकाउनु जरुरी छ । जब एउटा बच्चाले राम्रो संस्कार पाउँछ, उसले समाजलाई उज्ज्वल बनाउँछ र यस्ता कुरा स्कुलदेखि नै सिकाउन जरुरी छ भने आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नका लागि विभिन्न खालका प्रतिरक्षात्मक तालिम महिलालाई प्रदान गर्नु जरुरी देखिन्छ । गाउँ‑गाउँमा महिला हिँसा रोक्नका लागि तालिम दिनुका साथै महिलालाई स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
(नेपाल सरकारका लेखा अधिकृत कार्की हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत छिन् । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)
कोरोना महामारीको विश्लेषण र नेपालको अवस्था
पछिल्लाे - आइतबारदेखि सञ्चय कोषबाट विशेष सापटी लिन सकिने
अघिल्लाे - एकै दिनमा भारतमा ६ हजार ६५४ जना थपिए नयाँ संक्रमित